Lubuntu achasarudza iyo Wayland graphic server kune ayo anotevera vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Zvimwe zvinhu zvitsva zvakapihwa izvo zvinozoverengerwa mune dzinotevera shanduro dzeLubuntu, mamwe acho akataurwa pano pa blog. Uye ino nguva mugadziri anotarisira kusimudzira kwaLubuntu aburitsa nhau nyowani.
Simon Quigle (anovandudza Lubuntu) yakazivisa nyaya dzakakosha maererano neramangwana Lubuntu kuburitswa, sezvo zvazivisa kuti graphic server X.org ichatsiviwa neWayland.
Kune avo vaverengi vasingazive Lubuntu ndinogona kukuudza kuti iyi GNU / Linux sisitimu iyo yakavakirwa paUbuntu, asi nemusiyano wekuti panzvimbo pekushandisa desktop desktop iyo Ubuntu inoshandisa, Lubuntu inoshandisa nharaunda yeLXDE desktop .
Iko kuvandudzwa kweLubuntu kunovavarira kugadzira iyo inoshanda sisitimu iyo inoderedza zviwanikwa zvinodiwa kuti zvishande pakombuta. Saka hazvishamise kuti chirevo chake ndechekuti: "mwenje, kutsanya, nyore"
Lubuntu anoda kutsiva X.org neWayland
Kubva paUbuntu parizvino Lubuntu anoshandisa graphical server X.org nekumira. Zviripachena kuti hapana uye hapana chinokutadzisa kuita shanduko dzavanofunga kuti dzakakosha kuti uenderere mberi nechinangwa chako chekuva nesystem inoderedza zviwanikwa.
Sezvo iwe uchiziva, kubva panguva iyo payakatangwa makore masere apfuura, Lubuntu yagara iri flavour yeUbuntu yakatsaurirwa kumakomputa ekare.
Munguva pfupi yapfuura, zvakadaro, akatozivisa kuti uku kunhu kweUbuntu kwakasiya budiriro kune 32-bit kuvaka, Vagadziri vacho vafunga kushandura maitiro avo uye voda kuve yazvino Lubuntu kugovera.
Saka kusarudza Wayland neLXQt zvinoita sekusimbisa iyi sarudzo.
Izvi zvisati zvaitikao vakazivisa kuti remangwana vhezheni yeLubuntu ichave ine graphical server shanduko, ichitsiva X.org neWayland graphical server.
Aya mamiriro haachazochinja kamwe kamwe saka Lubuntu inoronga kuita kutama uku kuenda kuWayland kudzamara ishanduro ye20.10, saka izvi zvichave zvichiitika mumwedzi waGumiguru 2020.
Zvakare sevazhinji vaverengi vari vashandisi veUbuntu, iwe unozoziva kuti Canonical yatove kuyedza kuchinja iyo X.org server kuWayland seye default graph server muUbuntu 17.10 Artful Aardvark.
Kunyangwe shanduko iyi yakamubhadharira kushoropodzwa uye matambudziko akati wandei ekuenderana, aifanira kudzokera kuX.Org neiyo yazvino Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver vhezheni yezvikonzero zvine chekuita nekugadzikana kwesisitimu.
Iyi sarudzo naQuigley inogona kuratidza kuti sarudzo imwechete inogona kutorwa kubva kuCanonical yeUbuntu, kunyangwe neshanduro dzeLTS.
Parizvino shanduko iyi inotora makore anopfuura maviri, saka une nguva yakakwana yekutanga kuvaka hurongwa hwakagadzikana neiri graphical server.
Pakati pezvakataurwa nemusimudziri nezvazvo, ndinozviratidza mumibvunzo mitatu yakapusa nemhinduro dzavo:
Mubvunzo: Nei uri kuchinjira kuWayland?
A: Iyo X application ndeyechinyakare uye haizogadziridzwe kugadzirisa nzira iyo Linux desktop inoshandiswa nhasi. Mahwindo emaneja ndeekufungisisa, uye zvinhu zvakawanda hazvishande nemazvo. Wayland iyi yazvino vhezheni yeLinux system skrini.
Mubvunzo: Ko nezvevanhu vane makadhi emifananidzo eNVIDIA?
A: Zvimwe zvakawanda zvekugadzirisa, asi chirongwa ndechekutora iri basa nemakadhi emifananidzo panguva iyoyo.
Mubvunzo: Ini ndaifunga kuti Mir yakadonhedzwa pakadonhedzwa Ubuntu Ubuntu papuratifomu?
A: Mir akapona, uye achiri nechikwata chevashandi veCanonical vanoshanda paari.
Sezvandambotaura pazviitiko zvakapfuura, Wayland ine ramangwana rakanaka uye mune imwe nguva yenguva inogona kuve kutsiva iyo X.org graphical server mune mazhinji Linux distributions.
Canonical yaida kuedza kuita shanduko iyi, asi hazvina kushanda sekuronga kwavo, nekuti kuita shanduko yerudzi urwu hachisi chinhu chinogona kumisikidzwa munguva pfupi kudaro yemwedzi mitanhatu.
Pamusoro peizvi, makadhi evhidhiyo anotanga kutamba, inova imwe nyonganiso neiyo Canonical topo kana ichiita shanduko iyi.
Kana zvimwe, sezvakataurwa, makore maviri inguva yakanaka yekuronga uye nekupa mhinduro kumatambudziko makuru atinawo parizvino neWayland.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Lubuntu achasarudza iyo Wayland graphic server kune ayo anotevera mavhezheni